Khabiirka Taageerada Barnaamijka - Bloomington/Eden Prairie Cunnooyinka Lugaha - Cuntooyinka Gargaarka
Khabiirka Taageerada Barnaamijka - Bloomington/Eden Prairie Foods on Wheels
Magaca Shaqada: Khabiirka Taageerada Barnaamijka
Warbixin ku socota: Agaasimaha Barnaamijka
Waqti dhiman 20-25 saacadood todobaadkii
Ma tahay qof dareemaya in u adeegida dadka kale ay buuxinayso? Ma waxaad raadinaysaa jago runtii muhiim ah? Waxaan raadineynaa inaan shaqaaleysiino qof leh qiyamkan. Food on Wheels waxay ka shaqeysaa bulsho kasta oo Ameerika ku taal si ay wax uga qabato gaajada iyo go'doominta. Waxaan bixinaa cunto nafaqo leh oo macaan oo guriga lagu keeno iyo kobcinta madaxbannaanida waayeelka iyo dadka naafada ah.
Mawqifkan oo kooban: Iskudubarid oo fuliyaan hawlgallada barnaamijka si loo xaqiijiyo adeegga ugu guulaha badan uguna waxtarka badan dhammaan qaybaha barnaamijka.
Sawirka waajibaadka iyo waajibaadka muhiimka ah: Samee hawlaha maalinlaha ah ee xafiiska, la xiriir macaamiisha iyo iskaa wax u qabso, iskudubarid guuleysiga maalinlaha ah ee cuntada, la dhiso xiriir wanaagsan oo lala yeesho macaamiisha/qoysaska/ tabaruceyaasha/ iibiyeyaasha/barnaamijyada kale duwan, kaalmee Agaasimaha Barnaamijka marka loo baahdo.
Aqoonta: Waa in uu ahaado mid la isku halayn karo oo la isku halayn karo, dabacsanaan, dulqaad, is-hagaaya, habaysan, tafatiran jihayn, waayo-aragnimo u leh QuickBooks iyo Microsoft Excel iyo Word, ku raaxayso la shaqaynta koox yar oo samaynaysa farqi weyn.
Haddii aad xiisaynayso inaad ka mid noqoto ururkan la yaabka leh ee si adag u shaqeeya maalin kasta si uu dadka kale ugu farxo nala soo socodsii! U dir resumeygaaga iyo warqadda daboolka: Wendy Vossen [email protected] ama [email protected]